Avy amin’ny tontolon’ny bilaogy Jordaniana -Ankivy amin’ny vokatra Isiraeliana (sept 2005) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2018 9:06 GMT
Momba ny raharaha iraisam-pirenena
Noho ny fialan'ny Israeliana, maro ireo zavatra voalaza ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Jordaniana mikasika an'i Palestina, izay samy mikasika ny fialàna sy zavatra hafa. Biesan manoritsoritra ny fanesorana ho “andro manan-tantara ho an'ny vahoaka Palestiniana ary indrindra indrindra ho an'i Gaza“. Mandritra izany, Sugar Cubes mitatitra fa niakatra 48% ny fanafarana entana Israeliana any amin'ny tontolo Arabo tamin'ny taona 2004, ka nilaza izy hoe: “Tsy azoko mihitsy hoe nahoana isika no mila manafatra izany vokatra rehetra izany!”
Nilaza ihany koa i Biesan fa faly ery izy nahita ny “fanampiana nataon'ny Toby Fialokalofana Al Amaari tao an-tanànan'i Ramallah ao Morondrano Andrefana ho an'ireo sisa velona tamin'ny Rivo-doza Katrina“, ary manamarika ny tsy fisian'ny lanja nomena io zava-nitranga lehibe io: “Raha misy Palestiniana iray nanao fanambarana diso ara-politika momba ny loza Katarina, dia efa niely nanerana ny fampahalalam-baovao ny vaovao … fihetsika tsara avy amin'ireo mpitsoa-ponenana Palestiniana izany izay tsy mba hita tamin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena. “
Naneho hevitra momba ny hevitr'i Biesan mikasika ny fiangaran'ny fampitam-baovao Amerikana, nilaza i Deeb Dweik, fa “somary tezitra kely izy” rehefa nahare momba ny lahatsoratra Amerikana iray izay milaza fa ny famonoana an'i Mohammed Durra, izay nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny intifada dia “saika heloka bevava media tonga lafatra “.
Lulu avy ao amin'ny CafeLulu namoaka lahatsoratra miteraka fandinihana momba ny fahatsiarovana ny vono olona nataon'i Israely tamin'ny taona 1982 tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana Palestiniana Sabra sy Shatilla, hoy izy “Hafiriana no tsy hiraharahiana ny fahafatesan'ny Palestiniana, ary zara raha mitatitra izany amin'ny vaovao? ” Sabbah avy amin'ny bilaogy Sabbah manana lahatsoratra momba ny tsy fahombiazan'ny ONU amin'ny fametrahana famaritana ankapobeny ny “fampihorohoroana”.
Ity volana ity ihany koa no manamarika ny famoahana ny PalestineBlogs.net avy amin'ny Sabbah, bilaogy natokana ho fiarovana ny mpomba an'i Palestina amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny vaovao sy ny fomba fijerin'ny tontolon'ny bilaogy.
Momba ny hetsika ao an-toerana:
Ny Alarobia faha 14 no nanamarika ny fihaonana bilaogera Jordaniana faha-enina. Ny fihaonana faha-7 dia hotontosaina amin'ny 2 Oktobra.
Roba avy ao amin'ny Far Away mitatitra momba ny fandefasana sarimihetsika avy amin'ny Komitin'ny Filma Mpanjaka ahitana sarimihetsika fohy miisa 13 notontosain'ilay tanora Jordaniana, “Talanjona tanteraka tamin'ny zava-misy aho fa mifantoka eo amin'ny tsikera ara-tsosialy lehibe izay mbola tsy hitako velively tamin'ny fomba toy izany teo aloha ny sasantsasany amin'ireo sarimihetsika fohy. “ Wael Attili miresaka momba ny fampirantiana avy amin'ilay mpahay mari-trano Sahel Hiyari ao amin'ny Darat al Funun, hoy izy, “Tena nahavariana ahy ireo hevitra sahisahy sy ny fahazarana ara-haibika amin'ny asany.”
Eman avy amin'ny AquaCool manolotra tetikasa roa vaovao eo an-toerana, ny iray dia fanamboarana lalana ho an'ny bisikileta ao amin'ny arabe King Abullah faha-2 sy ny fanokanana hotely kintana telo ao afovoan'i Madaba. Miresaka momba ny “Follow the Women (Araho ny Vehivavy) ho an'ny fandriampahalemana izay handalo an'i Jordania ihany koa izy.
Ahmad Humeid nandray ny tetikasa “GPS Amman” ho toy ny ezaka tahaka ny wikipedia, ka mety ho tsara raha afaka manampy ny olona manana ireto fahaiza-manao manaraka izao:
Olona zatra wiki afaka mametraka wiki ho amin'izany.
Raha misy olona mahafantatra GPS wikis mitovy amin'izany mba hianarana.
Raha misy olona afaka milaza aminay ny fomba ahafahan'ny mpiserasera GPS mampiasa ny angona nangonina
Lina Ejeilat manana lahatsoratra miteraka fandinihana, manontany ny toerana misy ireo mpianatra amin'ny resaka fikatrohana – “Ny fankahalana sy ny tsy firaharahiana no areti-mandringana eo amin'ny tanora ao amin'ny fiarahamonintsika”. Mandritra izany fotoana izany, Linda Haddad manontany tena raha mandefitra loatra ny fitsarana Jordaniana. Amin'ny fanamarihana maivamaivana kokoa, Natasha Tynes manoratra momba ny zava-niainany tamin'ny baseball.
Miverina miaraka amin'ny fizarana iray hafa indray i Mix Up Arabia an'i Ahmad Humeid.